स्वास्थ्य – Page3– Tesro Ankha
काठमाडौं । दुब्लाउनका लागि अचेल ग्रीन टी पिउने ह्वात्तै बढेको छ । देशभित्रै ग्रीन टी बर्सेनि १० लाख मेट्रिक टनजति उत्पादन हुन्छ । साथै यो बाहिरबाट समेत आयात गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय ग्रीन टी खरिदमा लाखौं रकम बाहिरिने गरेको छ । व्यस्त जीवनका कारण मानिस अचेल व्यायाम गर्ने फुर्सदसमेत पाउन छाडेका छन् । व्यायाम गर्ने समय नपाउनेहरू अहिले विभिन्न औषधि वा चियाको सहारा लिएर दुब्लाउने प्रयास गरिरहेका...
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे उमेरले ९८ वर्षमा टेके । स्वच्छन्दतावादी भावधाराका कवि घिमिरे अहिले पनि उत्तिकै फुर्तिला र हँसिला छन् । मन सधैं चंगा बनाउन तल्लीन उनलाई बुढ्यौली शरीरले निराशा थप्न अझै सकेको छैन । बाल्यकालदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यलाई उचाइमा पुर्याउन सफल बहुमुखी प्रतिभाशाली घिमिरे अझै पनि सिर्जनशील काम र अध्ययनमा व्यस्त छन् । मजबुत स्वास्थ्यले उनको अध्ययन...
सावधान, जथाभावी मह खाए ज्यान जान सक्छ
चिनी धेरै खाँदा तीतो भएझैं मह खान जानिएन भने ज्यान जान सक्छ । मह र घ्यु बराबर खाए ज्यान जान सक्ने खतरा हुने बताइएको छ । विभिन्न रोगका अचुक औषधिका मानिने मह स्वास्थ्यवद्र्धक खाद्यवस्तुका रूपमा लिइन्छ । तर, मह सही तरिकाले खान जानिएन भने स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर पार्छ । तसर्थ, मह खाँदा विचार पुरयाउनुपर्छ । –मह र घ्यु बराबर ज्यान जान सक्छ । –मुला, कटहर महसित खान हानिकारक हुन्छ । –माछा, मासु ...
डा. प्रकाश बुढाथोकी विश्वमा हाल प्रत्येक १० व्यक्तिमा एक ६० वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेरका छन् । सन् २०५० मा दुई अर्ब वा प्रत्येक पाँच व्यक्तिमा एक वृद्ध हुनेछन् । त्यसबेला वृद्धको जनसंख्याले १४ वर्षसम्मका बालबालिकाको जनसंख्यालाई पनि उछिन्नेछ र १५ देखि ५९ वर्षका समूह बराबर हुनेछ । नेपालमा अहिले कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत वृद्धवृद्धा रहेको अनुमान छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ६५ वर...
हामी बाहिरफेर जाँदा वा समूहमा बसेर घरमै पनि खानेकुरा खाँदा पत्रिकाको प्रयोग गर्ने गर्छौं । त्यतिमात्र नभई, पसलेले खानेकुरा पत्रिकामै पोको पारेर दिन्छ । हामी पत्रिकामै राखे खाइदिन्छौं । हामीले कहिल्यै सोचेका छैनौं, पत्रिकामा खानेकुरा राखेर खाँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ । भारतको खाद्य सुरक्षा नियामक निकायले पत्रिकामा खानेकुरा राखेर खानेलाई सचेत गराउँदै भनेको छ, ‘पत्रिकामा खानेकुरा राखेको...
चितवन । विगतको तुलनामा कम भाइल ‘एन्टिस्नेक भेनम’ले सर्पदंशका बिरामीलाई निको पार्न थालिएको छ । एक बिरामीलाई एक सय ६५ भाइलसम्म एन्टिस्नेक भेनम दिइने गरेकामा अनुसन्धानपछि ३० भेनम भन्दा बढी दिनु नपरेको पुष्ठी भएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । स्विजरल्यान्डको जेनेभा विश्वविद्यालयको सहयोगमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियनद्वय डा. विजय पौडेल, डा. कालिदास अधिकारी ...
परिवारनियोजन गर्न महिला/पुरुषबीच प्रतिस्पर्धा
पाल्पा । जिल्लामा परिवारनियोजन गर्ने पुरुष र महिला बढ्दै गएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म एक सय ६९ जनाले स्थायी बन्ध्याकरण गरेको पाइएको छ । जसमा महिला एकसय २१ र पुरुष ४८ रहेका छन् । मानिसमा शिक्षा र चेतना विकास हुँदै गएपछि पछिल्लो समय स्थायी बन्ध्याकरण गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । आव २०७१/७२ मा दुई सय छ महिला र ९४ पुरुष गरी जम्मा तीन सयले स्थायी बन्ध्याकरण गरेका छन् भने आव २०७२÷७३...
नसर्ने रोगबारे पत्रकारलाई तालिम
धादिङ । हर्ट इन्टरनेसनल तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङद्वारा धादिङबेंसीमा नसर्ने रोगबारे पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिइएको छ । पत्रकारले लेख, रचना र समाचारको माध्यमद्वारा रोगी तथा सर्वसाधारणलाई जनचेतना जगाउने, सुसूचित गर्ने भएकाले पत्रकारका लागि एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको आयोजक संस्थाले बताए । सर्ने रोगभन्दा मुटु, मधुमेह, ब्लडप्रेसर, श्वासप्रश्वास, क्यान्सर, मिर्गौला र मानसिक रोगजस्...
बागलुङ । धवलागिरि अञ्चल अस्पतालले आफ्नै औषधि वितरण केन्द्र फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समयअघि अस्पतालले आफैंं फार्मेसी चलाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो । केन्द्रबाट ५६२ प्रकारका औषधि उपलब्ध हुने अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । “चौबीसै घन्टा सेवा दिने गरी फार्मेसी खुलेको छ,” चिकित्सक राजभण्डारीले भने, “बिरामीले अब १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको छुटमा...
काठमाडौँ । ‘मेरो वर्ष : म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ २०७४ राष्ट्रिय अभियान शुक्रवारबाट शुभारम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दशरथ रङ्गशालाबाट ‘मेरो वर्ष : म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ २०७४ राष्ट्रिय अभियान लेखिएको लोगो झन्डोत्तोलन गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरे । स्वास्थ्यमन्त्री, विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधि, प्रसिद्ध अभिनेत्री मनिषा कोइराला र सर्वसाधारणसहितको ¥यालीमा सहभा...